तपाईंको YouTube भिडियोहरू भाइरल बनाउनका लागि ह्याकहरू - YTpals
तपाईंको YouTube भिडियोहरू भाइरल बनाउनका लागि ह्याकहरू
जब यो भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूमा आउँछ, त्यहाँ यस समयमा YouTube भन्दा ठूलो कुनै पनि छैन। प्लेटफर्मले नवीन सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई आफूलाई मनपर्ने कुराहरू गरिरहन अनुमति दिएको छ, र यो निश्चित छ कि आउँदा समयहरूमा सामग्रीको भारहरू मंथन गरिरहनेछ। यद्यपि, यदि तपाइँ नयाँ YouTube-आधारित सामग्री सिर्जनाकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई भाग्यको स्ट्रोक बिना आफैलाई स्थापित गर्न गाह्रो हुने छ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, दर्शकहरू र सदस्यहरूलाई द्रुत रूपमा जम्मा गर्नका लागि तपाईंको भिडियोहरू मध्ये एउटा भाइरल हुनु आवश्यक छ। यस पोस्टमा, हामी तपाइँसँग केहि उत्कृष्ट YouTube ह्याकहरू साझा गर्नेछौं जुन तपाइँ तपाइँको भिडियोहरू भाइरल हुने सम्भावना बढाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, थप ढिलाइ नगरी, सुरु गरौं।
१. विवादास्पद विषयमा भिडियो बनाउनुहोस्
आधुनिक संसारमा, कुनै पनि दिन विवाद बिना जान्छ, र संसारभरका अधिकांश मानिसहरू विवादास्पद सामग्री उपभोग गर्न मन पराउँछन्। त्यसोभए, यदि तपाइँको प्राथमिकता YouTube भिडियो बनाउनु हो भने, तपाइँको लक्षित दर्शकहरूसँग सान्दर्भिक विवादास्पद विषय छान्नुहोस्। यदि तपाईंको भिडियो राम्रोसँग बनाइएको छ भने, त्यहाँ कुनै कारण छैन कि यसले छोटो समयमा धेरै हेराइहरू जम्मा गर्दैन।
2. रोचक शीर्षक र थम्बनेलहरू सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईंको भिडियोको शीर्षक र थम्बनेल पहिलो दुई चीजहरू हुन् जुन दर्शकहरूले YouTube मा देख्नेछन्। त्यसकारण तपाईंले अद्वितीय शीर्षकहरू र आकर्षक थम्बनेलहरू सिर्जना गर्न केही प्रयास गर्नुपर्छ। शीर्षकहरू सिर्जना गर्दा, क्लिकबाइट-प्रकार शीर्षकहरूको लागि जानुहोस्। यद्यपि, शीर्षकले दर्शकहरूलाई बहकाउने छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्। धेरै YouTubersहरूले प्राय: वास्तविक भिडियोहरूसँग सान्दर्भिक नहुने शीर्षकहरू लेख्ने गल्ती गर्छन्। यदि तपाइँ त्यसै गर्नुहुन्छ भने, तपाइँका दर्शकहरूले तपाइँलाई विश्वास गर्दैनन्। पक्कै पनि, यो रणनीतिले मुट्ठीभर भिडियोहरूमा धेरै हेराइहरू निम्त्याउन सक्छ, तर लामो अवधिमा यो तपाईंको दर्शकहरूलाई कायम राख्न प्रभावकारी हुनेछैन।
3. शीर्षकहरू र विवरणहरू लेख्नु अघि आफ्नो कीवर्ड अनुसन्धान गर्नुहोस्
खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) ले तपाईंको भिडियोहरू YouTube र Google मा फेला पार्छन् वा छैनन् भन्नेमा प्रमुख भूमिका खेल्छ। यद्यपि, धेरै YouTubersहरूले SEO मा ध्यान दिदैनन् र खोज सर्तहरू र वाक्यांशहरू समावेश नगरी शीर्षक र विवरणहरू लेख्नमा अडिग रहन्छन्। त्यसोभए, तपाइँको शीर्षक र विवरणहरू लेख्नु अघि केहि कीवर्ड अनुसन्धान गर्न सम्झनुहोस्। साथै, यदि तपाईं नयाँ YouTuber हुनुहुन्छ जसको प्लेटफर्ममा पर्याप्त फलोअरहरू छैनन् भने, कम प्रतिस्पर्धा भएका किवर्डहरूलाई लक्षित गर्नु उत्तम हुन्छ। यदि तपाइँ यसलाई वहन गर्न सक्नुहुन्छ भने, हामी तपाइँको तर्फबाट कुञ्जी शब्द अनुसन्धान गर्न एक पेशेवर एसईओ एजेन्सी भर्ती गर्न सिफारिस गर्दछौं।
४. YouTube सर्टको अधिकतम फाइदा लिनुहोस्
पछिल्ला केही वर्षहरूमा, छोटो-फार्म भिडियोहरूले लामो-फार्म भिडियोहरू हावी भएका छन् जहाँसम्म हेराइहरू चिन्तित छन्। TikTok ले क्रान्ति ल्यायो कसरी छोटो-फार्म भिडियोहरू प्रस्तुत गरिन्छ र हेरिन्छ, र अब, धेरैजसो अन्य भिडियो-स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूले TikTok-जस्तो सुविधाहरू समावेश गरेका छन्। उदाहरणका लागि, इन्स्टाग्रामको आफ्नै रिल्स सुविधा छ, जबकि YouTube ले शर्टहरू प्रस्तुत गरेको छ। त्यसोभए, तपाईंले प्लेटफर्ममा भाइरल हुने सम्भावनाहरू बढाउनको लागि समय-समयमा छोटो-फारम सामग्री पनि अपलोड गर्नुपर्छ।
5. विदेशी दर्शकहरूको लागि उपशीर्षकहरू अपलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईं संसारका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू आफ्नो भिडियोहरूसँग संलग्न हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले भिडियोमा उपशीर्षकहरू समावेश गर्नुपर्छ। जबकि YouTube सँग एक स्वत: उपशीर्षक सुविधा छ, यसको शुद्धता सर्वोत्तममा शंकास्पद छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ विदेशी देशहरूमा राम्रो गर्न सक्ने क्षमता भएको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, उपशीर्षकहरू थप्न विशेषज्ञहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस्। अवश्य पनि, यसले तपाईंलाई छोटो अवधिमा केही पैसा खर्च गर्न आवश्यक पर्दछ। यद्यपि, यदि तपाईंको भिडियो राम्रोसँग बनाइएको छ भने, तपाईंले त्यो पैसा पुन: प्राप्त गर्नुहुन्न भन्ने कुनै कारण छैन।
त्यसोभए, अब तपाईलाई तपाइँका भिडियोहरू भाइरल बनाउनका लागि केहि उत्कृष्ट YouTube ह्याकहरू थाहा छ, हामीले तपाइँसँग साझा गरेका कुराहरूमा आधारित कारबाही योग्य कदम चाल्ने समय हो। यदि तपाइँ थप सदस्यहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, YTpals मा प्रस्तावित सेवाहरू विचार गर्नुहोस्। YTpals मा, YouTube सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् नि: शुल्क YouTube सदस्यहरू, आफ्नो YouTube च्यानल बढाउनको लागि हेराइ र लाइक।
तपाईंको YouTube भिडियोहरू भाइरल बनाउनका लागि ह्याकहरू YTpals लेखकहरू द्वारा, 18 नोभेम्बर 2021
YouTube मा तपाइँको पोडकास्ट प्रचार कसरी गर्ने?
त्यहाँ धेरै किसिमका सामग्रीहरू छन् जुन ब्रान्डले डिजिटल स्पेसमा आफूलाई प्रमोट गर्न सिर्जना गर्न सक्दछ। जे होस्, पोडकास्टको बारेमा केहि चीज छ जुन यसले भर्खरको समयमा विशाल ट्र्याक्सन प्राप्त गर्ने कारण बनाइरहेको छ…।
कसरी YouTube मा तपाइँको खाना ब्लग प्रचार गर्ने?
तपाइँको लक्षित ग्राहकको द्वि घातुमान हेर्ने बानीमा अपील गर्नको लागि अब उत्तम समय हो, किनकि जब हामी घण्टा सँगै इन्टरनेटमा भिडियोहरू उपभोग गर्दै व्यय गरिरहेका छौं। भिडियो सामग्रीमा वृद्धि धेरै ब्रान्डलाई आकर्षित गरेको छ ...
तपाइँको भिडियो भाइरलमा जाँदै छ: R कुञ्जी नियमहरू पालना गर्न
जब सामग्री सिर्जनाकर्ता वा ब्रान्ड भिडियो मार्केटिंगको साथ सुरु हुन्छ, उनीहरूसँग साझा लक्ष्य हुन्छ - भाइरल हुनु। जे भए पनि, किन कोही पनि त्यस्तो सामग्री बनाउँन चाहन्छ जुन केवल औसत रकम प्राप्त हुन्छ ...